I-Wholesale FEELM Won iF Design Award 2020 umkhiqizo wobuchwepheshe obusha we-atomization. ifektri nabakhiqizi | OKUSHA
I-FEELM Won iF Design Award 2020 umkhiqizo wobuchwepheshe obusha we-atomization.
Ngenkinga yezemvelo yama-e-cigarettes ethola ukukhathazeka okuningi, izindaba ezinhle ukuthi abanye abakhiqizi bayithatha ngokungathi sína ekwenzeni kwabo. I-Disposable Paper E-cigarette, enqoba i-2020 iF Award, ngumsebenzi we-FEELM, umkhiqizo wobuchwepheshe obusha we-atomization.
Umkhiqizo we-FEELM uqukethe iphepha elisha elinobungani, elenza ngcono ukwehla kube sezingeni elimangazayo elingama-76% ngevolumu uma kuqhathaniswa nepulasitiki ejwayelekile. Futhi, ukwakheka kwamaphepha okugoqa amaphepha amaningi kubonakaliswa inhlanzeko nemisebenzi yenhlalo. Isendlalelo sangaphandle sesikhulumi somlomo singasuswa ngaphambi kokuba sidluliselwe kubasebenzisi abangu-15 abalandelayo. Lo mklamo uvikela impilo yomuntu futhi usabalalisa umqondo wokuvikelwa kwemvelo ngenkathi uhlala nabantu ababhemayo abadala.
I-DESIGN AWARD ingumncintiswano owaziwa umhlaba wonke womkhiqizo, ukupakisha, ukwakha, ukwakhiwa kwensizakalo, njll. Iqale ukukhishwa ngo-1953, ituphawu lokuzimela oludala kunawo wonke emhlabeni,uphawu lokufeza okuhle okuvelele okugxile emandleni wokuqamba.
I-FEELM inikeza ubuchwepheshe bokushisa obusha futhi obukhethekile bezinhlelo ze-pod ezivaliwe. INJOY, RELX, HEXA, Haka, VAPO, Alfapod, neminye imikhiqizo eminingi ilayishwe ubuchwepheshe be-FEELM. Umthamo wokuthengisa wama-pods ane-FEELM ngaphakathi udlule isigidi sezigidi.
Ngokufanayo neVaporesso neCCELL, iFEELMis isigaba esizimele sebhizinisi seShenzhen SMOORETechnology Limited., Okuyinkampani ehamba phambili embonini evukayo. Kunabachwepheshe abangaphezu kuka-400 eSMOORE Research Institute, enamalungelo obunikazi angu-1600 emhlabeni jikelele.
IVape Vans e-United States nase-Around ...
Ukuvota Intela e-United States nase-Aro ...
I-India: AbakwaVapers Bazobhikisha NgoSepthemba 1 ...
Ukuvota Kwentsha Kwehle ngama-29% ngo-2020, i-CDC Sur ...
Ugwayi Wokushisa, Ugwayi we-E Liquid Vapor, Ugwayi waseNewport E, I-Epen, Ukubhema Okuhlukile, I-E Cigarette Blister Pack,